ကလိုစေးထူး: ပျင်းရိစရာ နေ့တွင်...
အလုပ်သွားဖို့ ပျင်းတဲ့ထဲမှာ ညီမလေးလည်း ထိပ်ဆုံးကပါတယ်...၀ါးးး...ခုတောင် အိမ်ပြန်နှပ်ချင်ပြီ...:P
Jun 11, 2007, 10:28:00 PM
စာလေးရေးလိုက်၊ သီချင်းလေးဆိုလိုက်၊ ကဗျာလေး ဖွဲ့လိုက်၊ အချိန်တန်ရင် ၀င်ငွေလေး အထိုက်အသင့်ရလိုက်ဆိုရင် တယ်ကောင်းမှာပဲခင်ဗျ...
Jun 12, 2007, 4:39:00 AM
hhaa. Why dont you carry out your dream wth ma May huh. since both of you are in the same boat. hheheh;) ..justasuggestion.. ma so what, i am looser here since you have become top commentor in ko say blog.
Jun 12, 2007, 6:18:00 AM
“အလုပ်ထဲမှာ `မင်းက ဘယ်အလုပ်မျိုး ၀ါသနာပါလဲကွာ´ လို့ တယောက်ယောက်က မေးလာရင် …”
အလုပ်ပါဆိုမှ ၀ါသနာပါစရာလား လို့ ပြန်ဘုတောလိုက်မယ် … :P
အဲ .. ဒီလိုဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို “ေ၀၀န်း”လို့ ဆိုရမလား ..
“ပါဘိုးစို”လို့ ဆိုရမလား ..
တခုမှတော့ “နိုးဘွေးနို” ပဲ …
“စီး” .. နော် ..
အော်..တကယ်တော့ ကွန်မင့်ရေးရတာလဲ ပညာပါပဲ..
ကျမကတော့ ကိုစေးထူးရေးတာကို ကွန်မင့်မပေးဘဲ ကိုယ်ပြောချင်တာပဲပြောနေမိတယ်ထင်ပါရဲ့။
ခုလဲ ငါကတော့ တနင်္လာကို မမုန်းပေါင်လို့ စဉ်းစားနေမိတယ်။
မုန်းလို့လဲ မဖြစ်ဘူးလေ.. ကျမက တနင်္လာသမီးကိုး။
ပြီးတော့ ကျမကလေးတွေ ကျောင်းပြန်တက်တဲ့နေ့ဆိုတော့
ဟဲဟဲ.. တအားတောင် ပျော်သေးတာ..ဟီးး
Jun 12, 2007, 11:27:00 AM